HGH Malaysia | Halkee laga iibsadaa hoormoonka koritaanka ee Malaysia ee Kuala Lumpur
HGH Malaysia | Halkee laga iibsadaa hoormoonka koritaanka ee Malaysia ee Kuala Lumpur?
100% Tayada Horumarka Dufanka (HGH Somatotropin) ee Malaysia
Waxaan nahay qaybta rasmiga ah ee hormoonada koritaanka hormoonka Malaysia.
Waa maxay hormoonka koritaanka?
Hormoonka koritaanka (hormoonka koritaanka, STH, HGH, somatotropin) -
Hormarka peptide ee lafaha hore ee qanjirka 'pituitary gland', ayaa loo isticmaalaa isboortiga si loo sameeyo miyir-qabashada.
Da'da jirka ayaa si toos ah ula xiriirta heerka hormarinta hormoonka koritaanka.
Celcelis ahaan, ka dib 20 sanado kasta 10 heerka heerka waxsoosaarkiisu hoos u dhaco 15%.
Hormar kobcinta ma laha kala duwanaansho galmo. Taasi waa, heerkeedu waa isku mid ragga iyo dumarka.
Inkastoo xaqiiqda ah in isticmaalka daroogooyinka ay ku jiraan hormoonka koritaanka,
Waxaa mamnuucay WADO (Ururka Caalamiga ah ee Doping),
Dalka Malaysiya kuwan waa iib. Tilmaamaha loo isticmaalo:
- Xaydh gubanaya
- Jimicsiga iyo dhismaha jirka
- Tamarta sare,
- Barnaamijka La-dagaallanka Dabiiciga ah
- Hawlaha Maskaxda oo sii kordhaya
- Hawlgalka Immune Superior Superior
- Bogsiinta Boogta oo degdeg ah
- Kordhinta Galmada Llibido
- Kordhinta Cufka
Hormoonnada waa maadooyin dabiici ah oo muhiim u ah caafimaadkaaga. Marka la eego da'da, nuxurka hormoonka
Si tartiib ah ayaa loo yareeyaa, taas oo keeneysa in la dedejiyo
geedi socodka gabowga iyo soo bixitaanka xiriirka
Iyadoo da'da cudurada. Daweynta beddelaadda hoormoonka dabiiciga ah waxay dib u soo celisaa jirkaada heerka hoormoonada caanaha, iyaga oo ku soo celinaya heerarka jirkaagu uu caadaystay caadada dhalinyarada.
Talooyinka loogu talagalay bilowga:
- Ku bilaw 2IU maalin kasta ka hor intaadan aadin sariir (calool madhan).
- 5 maalmood iyo maalmo 2 ah.
- Waxaan soo jeedineynaa in la baddalo waqtiga subaxa / habeenkii (labadii biloodba mar).
Saxiix iyo ka heli dhimis!
Create an account in our dukaanka oo heli dhimis ah hormoonka koritaanka.